Ukuhlaziywa kweFirmware yeAirPods Pro kunye neeAirPods 2 ukuya kuhlobo 3E751 | Ndisuka mac
Ukuhlaziywa kweFirmware ye-AirPods Pro kunye ne-AirPods 2 ukuya kuhlobo 3E751
Cupertino Inkampani nje Hlaziya i-firmware ye-AirPods Pro kunye ne-AirPod yesizukulwana sesibini kuhlobo lwe-3E751, le nguqulo iza emva kokugqibela ukukhutshwa ngo-Septemba ophelileyo. Inyaniso kukuba ii-AirPod zifumana uhlaziyo ezimbalwa kodwa azidingi zininzi kuba zisebenza kakuhle.
Ndikwenza ityala kwaye njengoko kusenzeka kwezinye iinguqulelo zeenkqubo zokusebenza ze-iOS, ii-macOS, i-tvOS, njl. Akukho lwazi longezwayo malunga nokuphuculwa okumiliselwe kwii-headphone ezingenazingcingo zika-Apple kodwa kuyarhanelwa ukuba zinokongeza ezinye ukuphuculwa okanye ukulungiswa kwe-bug.
Okucacileyo kukuba ezi nguqulelo zintsha ze-firmware zifakwe ngokuzenzekelayo kuzo. Umsebenzisi akanyanzelekanga ukuba enze enye into ngaphandle kwe inee-AirPods okanye ii-AirPods Pro eziqhagamshelwe kwisixhobo se-iOS nangaphakathi kwimeko apho benza uhlaziyo lwe-firmware ngokuzenzekelayo.
Khumbula ukuba ungayijonga inguqulo ye-firmware oyifakileyo kwi-AirPods AirPods Pro yakho ngqo kwi-iPhone yethu. Ngenxa yoku kufuneka siye ku Ngokubanzi, malunga, ii-AirPods kwaye ujonge uhlobo lwefirmware olufakelweyo. Kuyinyani ukuba olu hlaziyo lunokongeza ukuphuculwa kokuzimela okanye nakwisandi seefowuni ngokwazo, kodwa eyona nto iyenziwayo kuyo ayaziwa.
Ii-AirPod ngokungathandabuzekiyo sesona sixhobo siphumelele kakhulu se-Apple Ngemvume ye-iPhone kwaye ngoku ngokufika kwee-AirTags. Ngayiphi na imeko, kubonakala ngathi ezi AirPods zixhaphakile kangangokuba zinokuphulukana nokuqaqamba kwintengiso yangoku, ukongeza asikayiboni imodeli entsha kumsitho ngo-Epreli 20 kwaye akukho marhe malunga nokuqaliswa kwayo kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Ukuhlaziywa kweFirmware ye-AirPods Pro kunye ne-AirPods 2 ukuya kuhlobo 3E751
Kubonakala ngathi ibango le-AirPods liyawa kwaye iApple ihambisa ithebhu
UNomad usungula isiseko sokutshaja esincinci kubahambi abaninzi